जीवनप्रसाद राईको ‘समृद्धिका आधार’ सार्वजनिक
जीवनप्रसाद राईको ‘समृद्धिका आधार’ लोकार्पण गरिएको छ।
प्रेम र युद्धको लय
लोग्ने नहुनुको पीडा स्वास्नीलाई, छोरो नहुनुको पीडा बाआमालाई जति हुन्छ, एउटा नागरिक नहुनुको पीडा देशलाई हुन्छ कि हुँदैन?
नोवल पुरस्कार विजेता टर्किस लेखक ओह्रान पामुकले ‘इस्तानबुल’ शीर्षकको निबन्धमा लेखेका छन्, “मेरो निम्ति संसारको केन्द्र भन्नु नै इस्तानबुल हो, जहाँ म जन्मिए र हुर्किएँ। त्यसैले मेरा लेखनका पात्र यसै शहरका गल्ली, चोक, मस्जिद, मान्छे र भुस्याहा कुकुर आदि हुन्।” पामुक झैं पराजुलीका निम्ति संसारको केन्द्र अर्थात् इपिसेन्टर कोटेश्वर हो।
बिर्सिन नसकेको प्रेम ‘म बिर्सूं कसोरी’ दिनेश अधिकारीको चौथो गीतसङ्ग्रह हो । यसअघि उनका ‘अविराम यात्रा’, ‘आफ्नै मनः आफ्नै आँगन’, ‘मन र मोडहरू’ गीतसङ्ग्रह प्रकाशित छन् ।
चार ग्रन्थको एउटै कृतिमा नेपाली साहित्यको इतिहास नेपाली साहित्यका विविध विधाको इतिहास फाट्टफुट्ट त प्रकाशन भएकै हो तर अब एउटै कृतिमा समग्र साहित्यको इतिहास भेटिने भएको छ । ‘नेपाली साहित्यको बृहत् इतिहास’ (जगदम्बा दोस्रो ठेली) को प्रकाशनले नेपाली साहित्यको अध्ययन गर्न चाहनेलाई सजिलो बनाइदिएको छ।
‘मृत्युको अघिल्तिर’ कविताको सङ्गीत कवितामा होस् या आख्यानमा होस् आमपाठकले चाहेको कुरा चिन्तन हो । भावको गाम्भीर्य हो, तर चिन्ता होइन । यस्तै चिन्तन त कवि मणि लोहनीको कविताकृति, ‘मृत्युको अघिल्तिर’ मा ।
जालोजस्तै जीवन तीर्थ सिग्देलका कथाहरु पठनीय छन् । अहिलेको समाजलाई बुझ्न सिग्देलका कथाहरुले धेरै सहयोग गर्छन् ।
हामीले नबुझेका किशोरकिशोरी घिमिरे युवराजको नयाँ नाट्यकृति किशोरवय, अभिभावकत्व र विद्यालयबीच समाजमा चलिरहेको त्रिपक्षीय अन्तरसंघर्षको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
‘नमासिने लिम्बू’को अपूरो इतिहास यो लेख राजकुमार दिक्पालको पुस्तक “आदिवासी विद्रोहको इतिहास” को समग्र समीक्षा होइन । पुस्तकका दुईवटा आलेख ‘लिम्बू विद्रोह–१८४८’ र ‘माझकिरात राई विद्रोह–१८६४’ को मात्र चर्चा गरिएको छ।
जोगीको संसार उपन्यासकार शैलेन्द्र अधिकारीले ‘निर्वेद’ मा जीवनलाई अध्यात्म र भौतिकवादको समष्ठिको रुपमा अथ्र्याएका छन्।
मध्यपहाडको मर्म पुस्तकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराईमाथि राजनीतिक प्रश्नको वर्षा भएको बुझ्न सकिन्छ । समयाभावका कारण धेरै ठाउँका पेचिला र खरा प्रश्नको सामना गर्न नेता भट्टराईलाई बडो कठिन भएको स्वीकार पनि लेखकले गरेका छन् ।
के कोरोना भाइरस र यी आख्यान संयोग मात्र हुन् ? कल्पनाशीलताका आाधारमा पुस्तक लेखे र फिल्म बने पनि कोभिड–१९ को यो संक्रमण विज्ञानमा आधारित भविष्यवाणी भने होइन, त्यसैले यी स्वैरकल्पनाका पछाडि नलागी सरकार, चिकित्सक, स्वास्थ्य निकायकै सुझाव मान्नु यतिवेला उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
पेरुङ्गोमा जीवनदृष्टि समग्रमा गणेश रसिक बुझ्न चाहनेले उनको ‘पेरुङ्गो संस्करण’ पढ्नैपर्छ । उनको कल्पनाशीलता मात्र होइन उनी बाँचेको जीवनको कालखण्ड बुझ्न पनि पेरुङ्गो पढिनुपर्छ, यस्तो कालखण्ड, जुन आजका सहस्राब्दी पुस्ताका लागि इतिहास बनिसकेको छ।
हाम्रा गाईगाेरुका पूर्वज
वाङमय कमल मादेन
पोन्वार, खेरीगढ र बचौर जस्ता गाईगोरु कसरी आइपुगे? नेपालमा थप कति गाईगोरु छन्, उत्पत्ति स्थल कहाँ हो? जस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ यो पुस्तकमा छ।
सिक्किमेली फूलकाे इतिहास
एशियाका कतिपय वनस्पति जातिको उद्गमस्थल हिमालयको पूर्वी भागलाई मानिन्छ । समयक्रममा ती वनस्पति चारैतिर फैलिए । चीनको हेङदुवाङ्ग पर्वत शृंखला यस्तै एक उद्गम हो, जहाँबाट गुराँस लगायत एशियामा पाइने थुप्रै वनस्पति जातिको उद्विकास भएको थियो ।
नयाँ विषय पुरानै शैली ‘सेतो घोडा’, ‘कार्यव्यसन’, र ‘सलाम बद्री’ मा जागिरको रैखिक र उमङ्गविहीन जीवनले जन्माएका निस्सारता तथा विरक्ति प्रष्ट प्रवाहित छन्।